Maxay siyaasadda Soomaaliya uga dhigan tahay magacaabista Xamsa Cabdi Barre? | Onkod Radio
Maxay siyaasadda Soomaaliya uga dhigan tahay magacaabista Xamsa Cabdi Barre?
Hamsa Abdi Barre, Ra'isul Wasaara magadaaban ee Soomaaliya.
Muqdisho (Onkod Radio) – Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamsa Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, horena u soo noqday xoghayihii Xisbiga xadaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyay 2011-2017.
Haddaba magacaabista Ra’isul Wasaare Xamsa, maxay uga dhigantahay siyaasadda Soomaaliya? su’aashaa iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xassan weydiiyay Proffessor Afyare Cabdi Cilmi oo madax ka ah hey’adda Cilmi Baarista ee Heritage ee fadhigeeduyahay magaalada Muqdisho, oo daraasado badan ka qortay dowlad wanaagga iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya.